Uyisebenzisa njani kwaye uyikhuphele i-Byte, indlalifa yoMdiliya | Iindaba zeGajethi
Uyisebenzisa njani kwaye uyikhuphele i-Byte, indlalifa eyangena kwiidiliya
Ngokuqinisekileyo ngaphezu komnye wabo bakhoyo sele eyazi okanye eyazi iVine iwebhusayithi eyaba sisicelo esifumanekayo kwizixhobo ze-iOS neze-Android. Ewe, ngoku emva kwethutyana sinokuthi ingxelo elandelayo yesicelo sele ifumanekile kuye wonke umntu kwaye ibizwa ngokuba yi-Byte.
Umdiliya ngokusisiseko uvumele umsebenzisi ukuba enze iifutshane, ezihlekisayo, iividiyo zoyilo, amaqhinga okufundisa okanye nantoni na umsebenzisi ayifunayo ixesha elifutshane kakhulu njenge-loop okanye i-GIF, emva koko le vidiyo inokwabelwana ngayo kwiinethiwekhi zentlalo ngendlela elula. Insiza entsha ebizwa ngokuba yi-ByteKuza kamva ukuhlala kwaye namhlanje siza kubona ngendlela elula yokuba singasisebenzisa njani esi sicelo kwifowuni yethu, nokuba yi-iPhone okanye isixhobo se-Android.
Ngaphambi kokuba siye ezantsi kwishishini, makhe sibone ukuba ngubani owenze iwebhusayithi yeVine, eyathi kamva yaba sisicelo sezixhobo eziphathwayo kwaye yaphumelela, kutheni ungatsho. Abenzi bale app babenjalo UDom Hofmann, uJacob Marttinen noRus Yusupov ngoJuni ka-2012, ke le sisicelo samagqala ngokwenene. Esi sicelo sathengwa kwakuloo nyaka mnye nguTwitter, xa sonke sasicinga ukuba sinokonyuka okumangalisayo, saphela silibalekile. Namhlanje sinezinye izicelo ezifanayo nezoMdiliya, ke sinokuthi ibingowokuqala ukubonelela ngolu hlobo lwenkonzo.
Okokugqibela, iqonga liza kuyeka ukunikezela ngeenkonzo zalo, libhengeza ukuba azisayi kwenziwa iividiyo kwiVine ngo-Okthobha u-2016 kwaye nangona abanye abasebenzisi banokuqhubeka nokukhuphela nokubukela umxholo, bekungafani. Umdiliya walitshintsha igama ngo-2017 ukubizwa ngokuba yiVine Camera kwaye abasebenzisi banokufaka iividiyo kodwa khange ibonelele ngokugcina ngoko ibingasasetyenziswa. Kwiminyaka edlulileyo, ukuhlehliswa kwayo okungenasiphelo kwaqinisekiswa ngu iingxaki zoqoqosho ubukhulu becala.
1 Umdiliya uvunyelwe ukwenza iividiyo malunga nemizuzwana esi-7
2 I-Byte ilapha ukuhlala
3 I-Byte isebenza ngokulula
Umdiliya uvunyelwe ukwenza iividiyo malunga nemizuzwana esi-7
Ukudalwa kweevidiyo kwiVini kwakukhatshwa lupapasho lwayo olulandelayo kwinethiwekhi yoluntu ezinje nge-Twitter uqobo, i-Facebook okanye efanayo, ke ezi vidiyo zemizuzwana emi-6 okanye esi-7 ubuninzi ekuqaleni zazanele wonke umntu. Njengoko ixesha lihamba, iqonga laqhubeka nokusetyenziswa kodwa ukuya kwinqanaba elincinci, ke ukunika isityholo kwagqitywa ekubeni kwandiswe ixesha elinokubhalwa ngabasebenzisi oku kudlulile kwade kwangama-140.
Kodwa ekugqibeleni yonke into yaba lilize ukusukela oko ukubhubha kukaHofmann kwenza yonke into iyeke kude kube kutshanje xa omnye wabadali wagqiba kwelokuba abeke emarikeni insiza entsha ukukhuphisana okanye ukugqithisa okhoyo, kubandakanya iTikTok eyaziwayo. Bayazi ukuba kunzima, kodwa akukho nto ingenakwenzeka kwihlabathi losetyenziso lweselfowuni ke eyona nto ilungileyo kukuzama.
I-Byte ilapha ukuhlala
Isicelo sibonelela ngohlaziyo olupheleleyo lwento ebeyinaso isicelo sokuqala seVine, kodwa enyanisweni kunjalo efanayo ngokwemisebenzi kunye neempawu enikelwe umsebenzisi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezi zicelo zisimahla kumaqonga omabini kwaye ekunene ekupheleni kweli nqaku unokuzikhuphela.
Insiza inikezela ngeyayo feed ukuphonononga wonke umxholo ngendlela elula nekhawulezayo kwasekuqaleni, ikwabonelela ngeendlela ezininzi zokuhlela iprofayili yethu ngokuthe ngqo kwiakhawunti yethu kwaye sinokufumana izaziso, njengeevidiyo esizithanda kakhulu okanye sizenzele ezethu ngokukhawuleza.
UDom Hofmann, ufuna ukutsala bonke "abachaphazeli" yangoku kunye naleyo izayo, ngenxa yoku ufuna ukwenza imali ngomxholo, into ebaluleke kakhulu namhlanje kwabo bazinikeleyo ekwenziweni kolu hlobo lomxholo. I-Instagram, i-Facebook, iTikTok kunye nezinye iinethiwekhi zokunxibelelana zezona zinto zibalulekileyo zingenisa abadali, ke kuya kufuneka ubakhuthaze ukuba bangene kwi-Byte kwaye yeyiphi indlela ebhetele yokubonelela ngokwenza imali kwezona zidumileyo:
Kungekudala siza kwazisa ngenkqubo yokulinga yeqabane lethu esiza kuyisebenzisa ukuhlawula abadali. I-Byte ibhiyozela ubuchule kunye noluntu, kwaye abadali abanomvuzo yindlela ebalulekileyo yokuxhasa abadali. Hlala ubukele ulwazi oluthe kratya
Akukho nto ininzi esinokuyithetha ngayo kwaye kukuba nokwenza imali ngomsebenzi wakho yinto esiyifunayo sonke kwaye kubonakala ngathi ukugxila kwezi ntlobo zezicelo ezinxibelelana ngokwasentlalweni ngokwenyani. Umxholo wokwenza imali.
I-Byte isebenza ngokulula
Into yokuqala ukuba ngoku kukho umxholo omncinci kulwimi lwethu kodwa sele sifumene iividiyo ezininzi ezinomdla. Inyaniso kukuba inomdla kwaye sinokuqala ngokuthetha ukuba kwi-app ye-iOS (apho sizame khona) isebenza ngokubhaliswa kwe-Apple okanye uGoogle, ke ngekhe sibe neengxaki ukubhalisa. Nje ukuba le nkqubo idluliswe singaqala ukwenza iividiyo zethu nge «loop» ixesha elincinci ngokucinezela iqhosha eliphakathi kunye nokuvumela ukufikelela kwikhamera nakwimakrofoni. Ke iya kuba sezandleni zakho ukuba wabelane ngayo okanye hayi, ngokubanzi kulula kakhulu.
Sinokusebenzisa injini yokukhangela ebonakala ngohlobo lweglasi eqaqambileyo ukufumana zonke iintlobo zomxholo, ukufikelela ngqo kwiprofayili yethu Ukutshintsha umfanekiso, wenze uhlengahlengiso endaweni yethu, ukwenza izaziso zisebenze kwaye zikwabonelela ngokuphuma okanye ukucima iakhawunti ngokuthe ngqo, kulula kakhulu ukucima iakhawunti yakho ye-Byte ukuba awukhululekanga.
Ukukhuphela i-Byte kwisixhobo sakho se-iOS okanye se-Android, kulula njengokufikelela ngqo kwivenkile yesicelo kwisixhobo ngokwaso kwaye ukhuphele okanye ucofe amakhonkco esikushiya apha ngezantsi. Kusimahla simahla Kwaye ungaqala ukwenza umxholo wakho ngokuthe ngqo ukusukela namhlanje ukuze uyile kwaye uzibonakalise kwihlabathi elikwisixhobo sakho se-Android okanye se-iOS.
Ungquzulwano: Inkxaso yabadali beVidiyoMahala
Ungquzulwano: Inkxaso yabadali beVidiyo
Umthuthukisi: Clash usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » Uyisebenzisa njani kwaye uyikhuphele i-Byte, indlalifa eyangena kwiidiliya
Matshi Kukhutshwa: I-iPhone 9, i-iPad Pro, iMacBook kunye nokunye okuninzi ...
Uyiphatha kanjani ilayisensi yokuqhuba kwi-Smartphone yethu